खानासँगै पानी पिउनु सही कि गलत ? के हुन्छ स्वास्थ्यमा असर ? - VOICE OF NEPAL
खानासँगै पानी पिउनु सही कि गलत ? के हुन्छ स्वास्थ्यमा असर ?
१८ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०२:१० 128 ??? ???????
मानिसहरू भन्छन्– खाना खाँदा पानी खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ । खानासँग पानी पिउनाले शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ । जसकारण मानिस बिरामी पनि पर्न सकिन्छ ।
डाक्टरका अनुसार कुनै पनि खानेकुरा खाँदा पानी पिउनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बिल्कुल सुरक्षित छ । तर, सबै खानेकुरा खाइसकेपछि तुरुन्तै पानी पिउनबाट बच्नुपर्छ । शरीरमा भएको इन्जाइम ग्यास्टिक जुस, प्यांक्रियाज र अन्य केमिकलले खाना पचाउन सहयोग गर्छ । तर, खानापछि तुरुन्तै पानी पिउँदा यो सबै इन्जाइम पानीसँग मिलेर पाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ । साथै, शरीरमा भएको पोषण तत्वलाई पनि सही ढंगले काम गर्न दिँदैन ।
तर, खानासँगै पानी पिउनुको मतलब एकैपटक धेरै पानी पिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । पटक–पटक गरेर एक गिलास पानी बिस्तारै पिउनुपर्छ ।
खाना खाएको करिब आधा घन्टापछि मात्रै पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । किनकि हामीले खाएको खाना पचाउन शरीरलाई दुई घन्टा लाग्छ । जब खाना पाचन प्रक्रियामा रहेको हुन्छ, तब शरीरमा तरल र ठोस पदार्थको एक निश्चित अनुपात बनिरहनु आवश्यक हुन्छ । यदि हामीले खाना खाएपछि पानी पियौँ भने यो अनुपात बिग्रिन्छ ।
धेरैजसो डाक्टरहरू खाना खाएको आधा घन्टापछि मात्र पानी पिउन सल्लाह दिन्छन् । ३० मिनेटको अन्तरालमा शरीरमा अलग–अलग पाचन प्रक्रिया सुुरु भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि पानीले पाचन प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्दैन ।